Redmi K30 5G အတွက် 6GB RAM မော်ဒယ်ကို ရောင်းပြီ – DigitalTimes
Redmi K30 5G ရဲ့ 8/128GB မော်ဒယ်ကို တရုတ်မှာ ရောင်းပေးထားပြီး အခုတော့ 6/64GB နဲ့ 6/128GB မော်ဒယ်ကို ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ ၁၉၉၉ ယွမ်နဲ့ ၂၂၉၉ ယွမ် သတ်မှတ်ထားပြီး မြန်မာငွေ ၄၂၀၀၀၀ နဲ့ ၄၈၀၀၀၀ လောက် အသီးသီးကျသင့်မှာပါ။
Redmi က K30 4G နဲ့ 5G ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလ အစောပိုင်းက ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ K30 5G ဟာ အသစ်စက်စက်ကြေညာထားတဲ့ Snapdragon 765G ပါတဲ့ ပထမဆုံး ဖုန်း ဖြစ်လာပါတယ်။ K30 4G မှာ Snapdragon 730G ပါပါတယ်။ Chipset က လွဲပြီး တခြား အစိတ်အပိုင်းတွေက တူညီကြပါတယ်။ အပူချိန်ကို ၇ ဒီဂရီအထိ လျှော့ချပေးတဲ့ Liquid Cooling နည်းပညာ ပါပါတယ်။
K30 ဟာ Sony IMX686 64MP Sensor ပါတဲ့ ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်မှာ ကင်မရာ ၄ လုံးနဲ့ အရှေ့မှာ ၂ လုံး ထည့်ထားပါတယ်။ 3D Curved Glass နဲ့ တည်ဆောက်ထားပြီး Corning Gorilla Glass5နဲ့ ကာကွယ်ထားတဲ့အတွက် အကြမ်းခံပါတယ်။ ဘေးဘက် လက်ဗွေရာ ကိရိယာပါပါတယ်။ 5G မော်ဒယ်မှာ 30W Flash Charge ပါပြီး ၁ နာရီအတွင်းမှာ ၉၇ ရာခိုင်နှုန်း အားဖြည့်ပေးပါတယ်။ 4G မော်ဒယ်မှာတော့ 27W Fast Charging ပဲပါပါတယ်။
• 6.67-inch (1080 × 2400 pixels) Full HD+ 20:9 LCD screen with 120Hz refresh rate, HDR 10, Corning Gorilla Glass5protection
• K30 5G — Octa Core (1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz +6x 1.8GHz Kryo 475 CPUs) Snapdragon 765G 7nm EUV Mobile Platform with Adreno 620 GPU
• K30 4G — Octa Core (2.2GHz Dual + 1.8GHz Hexa) Snapdragon 730G 8nm Mobile Platform with Adreno 618 GPU
• 6GB LPDDR4X RAM with 64GB / 128GB (UFS 2.1) storage, 8GB LPDDR4X RAM with 128GB / 256GB (UFS 2.1) storage expandable memory up to 512GB
• 64MP rear camera with LED Flash, Sony IMX686 sensor, 0.8μm, f/1.89 aperture, 8MP 120° ultra-wide sensor with 1.12μm, f/2.2 aperture, 2MP depth and 5MP (2MP in K30) macro sensors with 1.75μm, f/2.4 aperture, 4K 30fps, 960 fps at 720p
• 20MP front-facing camera, 2MP secondary camera with 1.75μm for portrait
• 3.5mm audio jack, FM Radio, 1217 Linear Speaker, Smart PA
• Dimensions: 165.3×76.6×8.79mm; Weight: 208g
• Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, Dual-frequency (L1+L5) (K30 5G), GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C
• 4500mAh (Typical) / 4400mAh (Minimum) battery with 30W (K30 5G) flash / 27W (K30) charge fast charging
အဖြူ၊ အနီနဲ့ ခရမ်းရောင်တွေ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ 4G နဲ့ 5G မော်ဒယ်တွေရဲ့ ဈေးတွေကို ပြန်လည် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
• Redmi K30 4G 6GB + 64GB — 1599 yuan (US$ 227 / Rs. 16,100 approx.)
• Redmi K30 4G 6GB + 128GB — 1699 yuan (US$ 241 / Rs. 17,120 approx.)
• Redmi K30 4G 8GB + 128GB — 1899 yuan (US$ 269 / Rs. 19,140 approx.)
• Redmi K30 4G 8GB + 256GB — 2199 yuan (US$ 312 / Rs. 22,150 approx.)
• Redmi K30 5G 6GB + 64GB — 1999 yuan (US$ 284 / Rs. 20,130 approx.)
• Redmi K30 5G 6GB + 128GB — 2299 yuan (US$ 326 / Rs. 23,170 approx.)
• Redmi K30 5G 8GB + 128GB — 2599 yuan (US$ 369 / Rs. 26,185 approx.)
• Redmi K30 5G 8GB + 256GB — 2899 yuan (US$ 227 / Rs. 29,200 approx.)
Ref : fonearena , gizmochina